Indlela yokubala ngokufanele umjikelezo wakho wokuya esikhathini?
Igama elithi "umjikelezo wokuya esikhathini" kwezokwelapha lisho ngokuzenzekelayo nangokushintshelwa ngokuzenzakalelayo ezakhiweni zesimiso socansi sowesifazane. Emjikelezweni ngamunye kunenkathi lapho kunqatshelwe khona i-endometrium yesibeletho, ehambisana nokubonakaliswa kokukhipha igazi, lokhu kungukuya esikhathini.
Usuku lokuqala emjikelezweni wesimiso kuthathwa njengosuku lokuqala kokuphuma kwegazi. Isikhathi sokujikeleza esiphelele cishe izinsuku ezingu-28, kodwa singahluka. Kwabesifazane abahlukene, umjikelezo wokuya esikhathini kungaba mfushane noma ngaphezulu. Ngakho-ke, kuvame ukubuza umbuzo ukuthi ungabala kanjani umjikelezo wakho wokuya esikhathini?
Isimo sokujikeleza kwesimiso sihlukaniswe "izinsuku eziphephile" nezinsuku "eziyingozi". Izinhlekelele yilezo zinsuku lapho owesifazane engakhulelwa, futhi ephephile - lapho ukhulelwe engenakufika. Amathuba okukhulelwa aphezulu ikakhulukazi ngesikhathi sokuvuthwa. Le nqubo ihlotshaniswa nokukhululwa kwe-ovule kusuka ebukhosini, uma ivuthiwe ngokugcwele futhi ilungele ukukhulelwa. Ngakho-ke kubalulekile ukwazi ukubala umjikelezo wakho wokuya esikhathini. Ngenxa yalokhu, ungazivikela ekukhulelwe okungafuneki futhi ube nesondo ngokuphepha. Ngakolunye uhlangothi, lokhu kuzosiza ukulungiselela ukukhulelwe ekuhleleni ukukhulelwa nokubeletha.
Kumele kuqashelwe ukuthi akulula ngaso sonke isikhathi ukubala izinsuku zomjikelezo, kusukela umjikelezo wesimeni ungaba khona.
Kumele kuqashelwe ukuthi izinsuku zokuhamba eziyingozi nokuphephile kwabesifazane ziyasiza kuphela ukuvimbela ukukhulelwa okungadingeki. Kodwa-ke, lokhu akuyona indlela yokuvimbela ukukhulelwa komzimba kanti kusekhona isongo sokuthola isifo esithathelwanayo esithathelwana ngokocansi. Uma kwenzeka owesifazane enomlingani oyedwa kuphela wezocansi, kungenzeka ukuthi kuncishiswe ukunciphisa ukukhulelwa komzimba kuphela ukulawula izigaba zomjikelezo wesimiso. Uma lo mjikelezo ulahlekile, ezinye izinguquko zibonakala emzimbeni, kubalulekile ukuphoqa ngokuphuthumayo ku-gynecologist.
Ngakho-ke, indlela yokubala kahle umjikelezo wokuya esikhathini. Kuze kube sekugcineni, kunezindlela ezehlukene ezisetshenziswa ngokulinganayo ngokulinganayo. Abesifazane banamuhla banikezwa ithuba lokusebenzisa izinhlelo ezikhethekile zokubala umjikelezo, othunyelwe kwi-intanethi. Kulula ukuthola ulwazi mayelana nendlela yokunquma ngokuqondile ukuqala kwe-ovulation, ukubala kanjani usuku lokubeletha lapho ubeletha ingane, ukuthi unqume kanjani ubulili bomntwana futhi ufunde ngokuqala kwe-premenstrual syndrome. Odokotela-gynecologists baqaphela ukuthi kulula kangakanani izinhlelo ezinjalo ezikhethekile, ngakho imiphumela yokubala inganyatheliswa futhi ithathwe ukuthatha nayo.
Ukuzibala komjikelezo wesimeni kwenziwa ngesandla. Kodwa-ke, ukuze ukwazi ukubala kahle umjikelezo wakho, udinga ukuqapha umzimba wakho nempilo cishe izinyanga eziyisithupha. Ngalesi sikhathi, kufanele ukhethe umjikelezo omfushane kakhulu kunayo yonke. Bala inani lezinsuku kulo mjikelezo kusukela ngosuku lokuqala, lapho ukuqala kokuya esikhathini futhi kuze kube usuku lokuqala lokukhishwa okulandelayo. Khona-ke, kusukela enombolweni eyahlanganiswa nezinsuku zomjikelezo omude kakhulu kunazo zonke, kufanele ususe izinsuku ezingu-18 no-10, ngokulandelana. Idijithi yokuqala ikhombisa inani lezinsuku eziphephile kusukela ekuqaleni kwenyanga, okwesibili kubonisa nezinsuku eziphephile, kodwa ekupheleni kwenyanga. Futhi isikhathi phakathi kwalezi zinombolo kubhekwa njengento enhle kakhulu ekukhulelwe, ngoba phakathi nalesi sikhathi amathuba okukhulelwa aphezulu kakhulu.
Enye indlela yokubala umjikelezo wokuya esikhathini ukuhlola izinga lokushisa okuyisisekelo, ngesisekelo esakhiwe ngalo igrafu. Le ndlela ibhekwa njengeyona ephumelela kakhulu, futhi odokotela bayayibona ukuthi iyona enembile kunabo bonke abakhona namuhla. Ukukala ukushisa komzimba kulandela kungakapheli inyanga. Ezinsukwini zokuqala zomjikelezo wokuya esikhathini, usezingeni lika-37 ° C. Ngemva kwalokho, ngemva kwelanga, izinga lokushisa lihlehlela ku-36.6 ° C. Ngemuva kokunye usuku olusukuma luya phezulu, lufinyelela ku-37.5 ° C, futhi luhlala kulokhu izinga kuze kube sekupheleni komjikelezo wokuya esikhathini, ukuwa kancane nje ngaphambi kokuqala kokuphuma kwegazi. Uma kwenzeka ukhulelwe, izinga lokushisa lizohlala lilingana eliphakeme njengalokhu phakathi nomjikelezo. Uma ukufundwa kwe-thermometer akukhulunywanga nhlobo, lokhu kusho ukuthi noma yiluphi usuku lomjikelezo lungabhekwa njengokuphephile, ukukhulelwa ngeke kwenzeke.
Ungakhetha kanjani iphilisi lokukhulelwa ngokwakho
Iyiphi indlela yokwelapha ngokweqile ngezocansi ezingavamile?
Ukuhlanza isikhumba sobuso ekhaya
I-Peach cheesecake ku-oven microwave
Uphawu lomuntu siqu noma "ukuzithengisa" kanjani wena?
Imidiya: UHillary Clinton uhlukanisa nomyeni wakhe
Isitokisi ngasinye - indawo yaso
Indlela yokuthuthukisa ukunakwa kwezingane zasenkulisa?
Yisiphi simulator sezemidlalo okufanele sikhethe
I-Focaccia nge-cherry utamatisi, i-dill ne-maasdam ushizi
Kungani udinga ukuthatha u-vitamin E